‘अफ्रिकामा दक्ष नेपाली कामदारले २० हजार डलरसम्म कमाउँछन्’ — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताफागुन २८, २०७५
कुमलटारी स्याङजामा जन्म भइ १० वर्षदेखि पोखरामा बसोबास गर्दै आएका कुल कार्की १७ वर्षदेखि अफ्रिकामा कार्यरत छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए केन्याका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की हाल आइसीसी सदस्य रहेर एनआरएनएमा सक्रिय रहेका छन् ।
कार्कीका अनुसार अफ्रिकामा कार्यरत सीपयुक्त दक्ष नेपाली कामदारले ५ सय देखि २० हजार डलर सम्म कमाउँछन् ।
कार्कीले एनआरएनए केन्याको अध्यक्ष रहँदा मुजराहमा नाँच्न लगिएका ८ नेपाली चेलीको उद्धार, ट्राफिकिङमा परेका १८ नेपाली दाजुभाइको उद्धार लगायत नेपालीका थुप्रै समस्या समाधानका लागि लागि परेका छन् । उनै कार्कीसँग संसारन्युज डटकमका लागि चन्दा थापा चन्द्रिकाले गरेको कुराकानी
अफ्रिका कहिले र किन जानु भयो ?
१७ वर्ष अघि अफ्रिका आएको हुँ । म यहाँ एक कम्पनीमा जनरल मेनेजरको रुपमा कार्यरत छु । यसका शाखाहरू युगाण्डा, रुवाण्डा, जाम्बिया र सुडानमा छ । ती कम्पनीहरूको डाइरेक्टरको रुपमा काम गरेको छु । हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीले प्लाष्टिकमा वाटर र सनिटेशन (सरसफाइ) इनर्जि, जस्तै प्लाष्टिक वायो डिजास्टर जसबाट Animal Dung बाट बायो ग्याँस उत्पन्न गरिन्छ र यहाँबाट २०० भन्दा बढी भेराइटीहरूको उत्पादन हुन्छ ।
एनआरएनए केन्या कहिले स्थापना भयो र त्यसले के–के काम गर्यो ?
२०११ को डिसेम्बरमा मेरो नेतृत्वमा एनआरएनए केन्याको स्थापना भएको हो । अहिले कृष्ण भट्टजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यतिबेला हामीले मानव बेचविखनको विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । मेरै नेतृत्व रहेका बेला मुजराहमा नाँच्ने ८ नेपाली चेली र ट्राफिकिङमा परेका अन्य १६ जना नेपाली भाइको उद्धार गर्न सफल भयौं । केही जनालाई प्लेन टिकट समेत काटेर पठाइयो । केहीलाई मैेले केन्यामै रोजगारी पनि खोजिदिएको छु । एनआरएनए युगाण्डाको स्थापना पनि मेरै अगुवाइमा भएको हो । यसमा हाल एनआरएनएका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहनुभएका हिक्मत थापाको पनि सहयोग रहेको छ । हाल म एनआरएनएको अफ्रिका क्षेत्रबाट विधान संशोधन समितिको सदस्य पनि छु ।
अफ्रिकाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
सर्वप्रथम अफ्रिकालाई हामीले पिछडिएको देशको रुपमा लिने गर्दछौं । तर, अफ्रिका देश हाम्रो जस्तै विकासको चरणमा रहेका देश हुन् । विकासमा यिनीहरू हाम्रो देश भन्दा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
यहाँ कस्ता क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावना छन् ?
यहाँ लेवर भन्दा पनि दक्ष व्यक्तिका लागि रोजगारीको सम्भावना बढी छन् । विशेष गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, सिए लगायतका व्यक्तिहरूको माग बढी छ । यहाँ तलब पनि राम्रो छ । ५ सय देखी २० हजार डलरसम्म कमाउने पनि छन् ।
अफ्रिकामा नेपालीका समस्या के के छन् ?
यहाँ धेरै नेपाली नभएकोले समस्याहरू त्यति धेरै छैनन । यहाँका मानिसहरूले नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छ । तर, पछिल्लोपटक मानव तस्करी निकै बढिरहेका छन् । यहाँ प्राय इस्ट अफ्रिकी देशहरूमा अन अराइभल भिसा पाइन्छ र एजेन्टले त्यसको फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ । हामी जुन जुन देशमा एनआरएनए एनसीसी छ, त्यहाँका साथीहरूले यी समस्याहरू कम गराउनका लागि पहल गरिरहेका छौं । यस्ता कुरामा आर्थिक तथा समय पनि बढी खर्च हुने र सरकारी तबरबाट समस्या सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकोले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दलालको लहलहैमा लागेर नआउन अनुरोध गर्दछु । त्यसरी आउँदा वर्क परमिट नपाइने र समस्यामा पनि परिने भएकोले ख्याल गर्नु सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
भर्खरै सम्पन्न एनआरएनए अफ्रिकाको बैठकमा पनि यहि कुरा उठाउनु भएको थियो होइन र ?
हजुर, बैठकमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी कुरा मात्र नभएर धेरै कुरा उठेका छन् । लगानीका विषयमा, पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयलगायत थुप्रै कुराहरू उठेका छन् । अफ्रिकाका १३–१४ देशबाट साथीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सबै देशका साथीहरूले आफू कार्यरत देशका बारेमा सेयर गर्नुका साथै विविध विषयमा छलफल भएको थियो । यी छलफहरू आगामी दिनमा समाज र देशका लागि धेरै उपयोगी हुने विस्वास मैले लिएको छु ।
अफ्रिकामा आगामी सम्भावनाहरू के के देख्नु भएको छ ?
भविष्यमा हामीजस्ता दक्ष जनशक्तिका लागि अफ्रिका धेरै राम्रो भएको र हुने विश्वास लिएको छु । दक्ष नेपालीका लागि अफ्रिका कमाउने मौकाको देशका रुपमा हुनेछ । यहाँ नेपालीको संख्या बढ्दै जाने र लगानीको पनि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । व्यवसायमा पनि प्रगति गर्न सकिन्छ । आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल ५ वर्षमा कभर गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले अफ्रिकी देशहरूमा नेपाली दूतावास वा सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अनिवार्य गराउनु पर्दछ । इस्ट अफ्रिकी देशहरूमा केन्या वा युगाण्डामा सकारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा अन्य दुई तीन देशमा पनि आवश्यक देखिन्छ । जस्तो की, सेन्ट्रल अफ्रिकाबाट टुरिजम विजनेश र रोजगारीको फाइदा लिन सकिन्छ ।
मेरो शिक्षा पोलिमर इन्जिनियरिङ हो । यो मैले भारतबाट अध्ययन गरेको हुँ । यदि नेपाल सरकारले राम्रो वातावरण बनाएमा सीपको उपयोग गरी आफ्नै देशमा सानो उद्योग खोलेर युवालाई रोजगारी दिने मेरो धोको छ । त्यसका लागि सरकारले ‘वान डोर सिस्टम बनाउन अति जरुरी छ । यसो गरेमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि सहज हुनेछ भन्ने मेरो भनाई छ ।